Ekipa fanontana | Nutri Diet
Nutri Diet dia tranonkala Espaniola iray mifantoka amin'ny fanatsarana ny sakafo, fahasalamana ary fahasalamana amin'ny mpampiasa rehetra. Niorina tamin'ny taona 2007 izy io, ka nahatonga ny lazany notazonina noho ny antsika ekipa manoratra izany, mizara ireo soatoavina sy fitsipika mitovy amin'izany, dia mamokatra atiny kalitao isan-kerinandro.
Raha liana ianao midira amin'ny ekipanay mpanoratra miaraka amin'ny traikefa, azonao atao fenoy ity takelaka manaraka ity y hifandray isika miaraka aminao.
Raha te hahita ireo lohahevitra rehetra nandrakitra ny taona maro izahay manomboka manatsara ny fiadananao dieny izao dia azonao atao ny mijery ny pejy fizarana.
Mpitsabo sakafo voajanahary sy mpankafy sakafo mahasalama, tiako ny manampy ny olona hanana fomba fiaina mahasalama kokoa. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana sakafo ara-batana sy fanatanjahan-tena mety dia azo atao ny manao izay tsara indrindra vitanao isan'andro, ary ambonin'izany rehetra izany dia ho faly kokoa.
Tiako ny mijery ny sakafo mahavelona, ​​ny fahasalamana ary ny toetran'ny sakafo fa tsy vahaolana amin'ny olana fa ny fomba fiainako manokana. Tao an-trano dia naseho taminay ny lalana mankany amin'ny sakafo tsara hatramin'ny fahazazanao, izay nanome valisoa ny kalitao ambonin'ny zavatra rehetra. Noho izany dia nitsangana ny fahalianako be amin'ny gastr gastrie sy ny kalitaon'ny sakafo. Hatramin'izao dia mipetraka any ambanivohitra aho, mankafy ny rivotra madio rehetra raha milaza am-pifaliana anao izay rehetra tianao ho fantatra momba ny sakafo, sakafo tsara ary fanafody voajanahary.
Teraka tany Malaga tamin'ny 1965, ary liana amin'ny tontolon'ny sakafo sy ny fahasalamana voajanahary aho. Zava-dehibe ny fisakafoanana mba hananana fiainana salama, noho izany dia tiako ny manavao ny toetr'andro amin'ny sakafo sy ny sakafo, satria afaka manome torohevitra tsara kokoa aho.